Maxkamadda Ciidamada oo toogasho ku fulisay Cabduqaadir Faarax | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Maxkamadda Ciidamada oo toogasho ku fulisay Cabduqaadir Faarax
Beledxaawo (Dalkaan.com) – Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, qaybta 27-aad ayaa markale saaka aroortii dil toogasho ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya oo horay qof shacab ahaa ugu dilay magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo.
Askariga la qisaasay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray, Cabduqaadir Faarax Dhaqane, kaas oo dhowaan maxkamaddu ay ku ridday dil toogasho ah oo ugu dambeyn lagu fuliyey.
AUN Mowlidd ayaa ahaa Farsamayaqaan sameeya gawaarida, waxaana dilkiisa uu ka dhashay, kadib markii ay is maandhaafeen isaga iyo askariga maanta la toogtay.
Fagaaraha lagu toogtay marxuumka waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsan Maxkamadda Ciidamada, ehellada marxuumkii horey u dilay, mas’uuliyiin ka mid ah maamulka Gedo.
Sidoo kale xukunka ay saaka fulisay maxkamadda waxaa si aad ah u soo dhoweeyey waalidiinta iyo ehellada marxuum Mowliid Baashe Cumar oo ku sugan Beledxaawo.
Waa dilkii labaad oo ay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida fulineyso, waxaana ugu dambeeyey Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan (Dhafoor) oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda, kaas oo shalay lagu toogtay barxadda degmada Luuq, kadib markii isna lagu helay dil uu u geystay marxuum Sugow Gaarane oo ahaa wade mooto Bajaajle.
Xog: Guddoomiyihii hore ee guddiga FEIT iyo xubin kale oo loogu...
Yuusuf Garaad oo shaaca ka qaaday xalka xiisadda Villa Soomaaliya
Daawo: Maxamuud Sayid Aadan oo si aan horey u dhicin ugu...